. ခြေလှမ်းဦး များနှင့် ကခုန်ခြင်း တစ် – ပါဝါ (58) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » . ခြေလှမ်းဦး များနှင့် ကခုန်ခြင်း တစ် – ပါဝါ (58)
. ခြေလှမ်းဦး များနှင့် ကခုန်ခြင်း တစ် – ပါဝါ (58)
Posted by မြစပဲရိုး on Jun 6, 2015 in History | 22 comments
MG ခြေလှမ်းဦး များ
တကယ်တော့ သမိုင်း ဆိုတာ လေ့လာကြည့်ဖို့ တကယ်ကောင်းတာပါ။
လူတစ်ဦးချင်းစီ ရဲ့ သမိုင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီရဲ့ သမိုင်း၊ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံချင်းစီ ရဲ့ သမိုင်း၊ ကမ္ဘာကြီး ရဲ့ သမိုင်း လိုမျိုး တွေ အပြင် နည်းပညာ ဆိုင်ရာ၊ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး စတဲ့ နေရာတွေမှာလဲ သမိုင်းကြောင်းတွေ ရှိပါတယ်။
ယုတ်စွ အဆုံး ခဏဘဲ တင့် တဲ့ ပန်းကလေးတစ်ပွင့်မှာတောင် သူ့အတွက် သမိုင်း ရှိခဲ့တာ။
အခုဆို ပန်းမြင်တိုင်း လက်စွမ်းပြနေကြတဲ့ ရွာသူ/သား များကြောင့် တစ်ချို့ပန်းလေး တွေ အင်တာနက်ထဲ မှာတောင် ဇာတ်လိုက် တွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီ။
. မောင် (MG) လို့ တင်စားနိုင်တဲ့ မြန်မာဂဇက်ရွာလေး ကလဲ သူ့နည်းသူ့ဟန် ဝင့်ကြွားစရာ သမိုင်းကြောင်း ခြေရာ တွေ ချခဲ့ ရုံမက လက်ရှိကာလမှာလဲ တင့်တယ်နေဆဲလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
. ရထားကြီး တစီးပေါ် လိုက်ပါလာတဲ့ ခရီးသည် တွေ လို တစ်ချို့လဲ လမ်းခုလတ် ထဲ ဆင်းကျန်ခဲ့တယ်။ တစ်ချို့ လဲ မညည်းမညူ လိုက်ပါလာဆဲ။ တစ်ချို့ ကတော့ တက်လာလိုက် ပြန်ဆင်းသွားလိုက် နဲ့။
ဘယ်လိုအခြေအနေ နဲ့ ဘဲ ရွာထဲ ခြေရာချချ၊ အခိုက်အတန့် ဘယ်လောက်ကလေး ဘဲ နေနေ ဂဇက်ရွာရဲ့ နွေးထွေးမှု ကို အမြဲခံစား သွားစေချင်တယ်။
အရင်လူတွေ ရဲ့ စကားသံတွေ ကိုလဲ လက်ရှိလူတွေက ခံစားကြည့်စချင်တယ်။ ရီစရာတွေလဲ တွေ့နိုင်မယ်၊ မောစရာများ လဲ မြင်နိုင်မယ်။
တစ်ခါတစ်ခါ လက်ရှိကာလ တစ်ခု ကနေ အတိတ်ကာလ ထဲ သွားပြန်ဝင်ကြည့် ရတာလဲ အရသာတစ်ခုပါ။
၂၀၀၈ ထဲ က နေ စုစည်းလာတဲ့ စာတွေထဲ က စိတ်ဝင်စားစရာ ဘာတွေများ တွေ့နိုင်မလဲ ဆိုတာ ကို သိချင်စိတ် ဖြစ်လာတာမို့ ဒီ Study ကို လုပ်ကြည့်တာပါ။
ကမ္ဘာကြီး ထဲ အသင်းအဖွဲ့ပေါင်း မြောက်များစွာရှိမယ်။
အဲဒီထဲ မှာ လူချင်းတောင် မမြင်ဘူးဘဲ စကားပြောနေတဲ့ အွန်လိုင်းအဖွဲအစည်း တွေလဲ မရေမတွက်နိုင်ရှိလာတယ်။
ဒီလို နေရာတွေ မှာ ရင်ဖွင့် စကားပြော လာသူ အများကြီး ရှိနေတာ မယုံနိုင်အောင်ပါဘဲ။
အပြင်မှာနဂို ခင်မင်သူတွေ ထက် မမြင်ဘူး တဲ့ သူတွေ ကို ပိုပြီးတွယ်တာလာတာ၊ စကားတွေ ဝေမျှ ပြောနိုင်နေတာ နည်းပညာတိုးတက်မှု တစ်ခု ထဲကြောင့်တော့ မဟုတ်နိုင်ဘူး။
လူတွေ သန်းပေါင်းများစွာထဲ အွန်လိုင်းသုံးသူ သိန်းချီရှိမှာပါ။
အဲဒီထဲ က လူတစ်ချို့ ဒီလို ရွာထဲ ရောက်လာပြီး အချင်းချင်း ဆွေရင်းမျိုးချာ လို ဖြစ်သွားတာ တစ်နေရာမှာတော့ Reason တစ်ခု ရှိကိုရှိရမယ်။
လေကြော ရှည်တာ ရပ်ပြီး လိုရင်း ကို သွားရရင် ….
စာရင်းပေါက် လူပေါင်း ၂၇၉ ယောက် ထဲမှာ တင်ထားတဲ့ သူ နှစ်ရာကျော် ရှိမှာပါ။
အဲဒီထဲ က နံပါတ် တစ်ခု လက်ထဲ ရောက်လာဖို့ ၂၇၉ ရေးမှာ ၁ ရေး ဘဲ ရှိပါတယ်။
ပထမဆုံး ပွဲဦးထွက် မှာ ဦးဆုံး ၁ရေး ကျ လိုက် တဲ့ Postက ဒီအချိန်မှာ ပြန်တူးဖော်လို့ မကောင်းတဲ့ လူမျိုးရေး ဖြစ်နေတာကြောင့် ပယ်လိုက်ရပါတယ်။
စိတ်တော့မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုအကြောင်း ကိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အမုန်းတရား ပါနေရင် မဆွေးနွေး လိုပါ။
ဒါပေမဲ့ Study အတွက် တော့ စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်ချက် ရခဲ့တယ်။
ဒီတော့ ဒုတိယ ၂၇၈ ရေးထဲ က နောက် ၁ရေး အတွက် မဲထပ်နှိုက်ပါတယ်။
မဲကျ သူက နံပါတ် (၅၈) ကိုအောင် ပါ။
မှတ်မိတာ မမှားရင် သမီးချောလေး နှစ်ယောက် ပိုင်ရှင်နဲ့ ရွာကို သံယောဇဉ်ကြီး ခဲ့သူ တစ်ဦးလို့ မှတ်ထားမိတယ်။
ကိုချို လို့လဲ နောက်အမည်တစ်ခု ရှိတယ်။
သူ့ ရဲ့ ရွာအဝင် ပထမဆုံး ခြေလှမ်းအချ က “vacation to sydney and aucland” လို့ အမည်တပ်ထား တဲ့ ခရီးသွားဓာတ်ပုံလေး တွေ ကို မျှထားတဲ့ ပို့စ်လေးပါ။
Sep 1, 2011 နေ့မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ် နီးပါးက ပေါ့။ ကိုယ်တောင် ရွာထဲ မရောက်သေးပါ။
ရွာ ရဲ့ လက်ရှိသက်တမ်း နဲ့ ဆို ခေတ်လယ် လောက်က လို့ ပြောနိုင်မလား ဘဲ။
. အော်ဇီ ကို အလည်သွားရင်း ရလာတဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေ နဲ့ ပို့စ် ကို စိတ်ဝင်စားသူ တွေ ရှိခဲ့ကြတာ မဆန်းပါဘူး။
ပထမဆုံး သူ့ရဲ့ ပို့စ် ကို မှတ်ချက် ဦးဦးဖျားဖျား ပေးလိုက်သူက ကိုနိုဇိုမိ ပါ။
အမယ်မင်း …. ရွာအဝင် စမ်းတစ်ဝါးဝါး ဖြစ်နေသူ အတွက် ရေတစ်ခွက်ကမ်းရင်း သူကြီး ဓား အကြောင်းကိုလဲ သတိပေးလိုက် သေး။
အဲဒီ တုန်းက သူကြီးမင်း ကို ကြောက်ရတဲ့ ခေတ်များလားတော့ မသိ။
စိန်ပေါက်ပေါက် ရဲ့ ” ဂေဇတ်အသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန်လေး” လဲ ထွက်နေပြီ မို့ အဲဒီ ဟာလေးကလဲ ရွာအဝင် လမ်းမမှား အောင် အတော် အသုံးဝင်ပါတယ်။ (အခု တော့ Result Page not found ဖြစ်နေရှာပြီ။)
အဲဒီအချိန် အဘဖော လဲ ရွာထဲ ရောက်နေပေမဲ့ ပို့စ်မတင်နိုင်သေးတာ တွေ့ရတယ်။
ခမျာ မြန်မာစာမတတ် တော့ (မရိုက်တတ်တော့) သနားစဖွယ်တောင်ဖြစ်နေပါလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ကာလ လောက်မှာ မြန်မာလို ရိုက်ဖို့ အတော်ရုန်းကန်ရတာ ကိုယ်တွေ့ဘဲ။
ကိုအောင် လဲ မြန်မာလို ရိုက်ဖို့ အခက်အခဲ ရှိနေခဲ့ပုံပါဘဲ။
ကိုအောင်ရဲ့ ပို့စ်အပြီး အဘဖောတစ်ယောက် ပိုးဝင်သွားခဲ့တယ် ထင်ပါတယ်။
အဲဒီ အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုအောင်။
ဆူး ကတော့ အတော်လေး ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် မြန်မာလိုရိုက်ပြောနေတာ မို့ မြန်မာပြည်တွင်း မှာ တော့ အလေ့အကျင့် ရှိနေကြပုံဘဲ။
အပြင်လူ တွေ အခက်အခဲ ရှိတာ ပိုများနိုင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ မန္တလာသူ ရော၊ ပုခ်ျ လေးပါ အင်္ဂလိပ်လို ဝင်ပြီး မှတ်ချက်ပေးတော့ ခန့်မှန်းလို့ ခက် သွားပြန်တယ်။
အဲဒီအချိန် အင်တာနက်ကို ဖုန်း တွေ နဲ့ မသုံးနိုင်သေးဖူး လို့ တော့ ထင်မိတယ်။
ဆူး ကတော့ သူ့ ရုံးခန်းမှာ ပီစီ နဲ့ သုံးနိုင်တာ ထင်ရဲ့။
ရွာထဲ အဝင် ခြေလှမ်း အစမှာ မှတ်ချက်လေး တွေ နဲ့ အားပေးသွားတဲ့
“ကိုနို၊ အဘဖော၊ ဆူး၊ မန္တလာသူ နဲ့ ပုခ်ျ ” တို့ရဲ့ နွေးထွေး တဲ့ ခင်မင်မှု ပြယုဂ် တွေ ကြောင့် ကိုအောင်တစ်ယောက် ရွာထဲ မှာ ဆက်ပြီး ပျော်နေနိုင်ခဲ့တာလို့ မြင်လိုက်ရပါတယ်။
ရွာထဲ မှာ ပို့စ်ပေါင်း ၅၁ ပုဒ် ကို မျှဝေခံစား စေခဲ့ပြီး လောလောဆယ်မှာတော့ ရွာ နဲ့ ဝေးနေသူ တစ်ယောက်ပေါ့။
Feb 27, 2013 – မီးထွန်းပွဲတော် (ထိုင်ပေ) အပြီး ရွာထဲက ပျောက်သွားတယ်။
အဲဒီ Post ကို ဖတ်အပြီး မှာတော့ မီးထွန်းဖို့ အလှဆင်ထားတဲ့ အရုပ်ကြီး တွေ ကို သဘောကျသူကျ၊ သီချင်းဝင်ဆိုသူ ဆို၊ သမီးလေး တွေကို ဝင်ပြီး မျှော်သူမျှော်၊ ကိုယ့်ပြည်က သီတင်းကျွတ် က ပိုပြီး လှမလှ ပိုပြီး စည်မစည် ယှဉ်သူယှဉ်၊ မီးတွေဆွဲလွန်းလို့ ဖျူးစ်ပြတ်သွားနိုင်တဲ့ အရေး တွေးသူတွေး ရှူဒေါင့်ပေါင်းစုံ အမြင်တွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ် အချိန်လေးတွေ ရခဲ့ပါတယ်။
လူတိုင်းမှာ တစ်ခြားအရေးပေါင်းများစွာ ရှိတာ နားလည်ပေမဲ့ အချိန်လေးများ ပေးနိုင်သလောက် ရွာထဲ မကြာကြာ ပြန်လာပြီး ဗဟုသုတလေး တွေ ဆက်မျှပေးနိုင်ရင် ကောင်းမှာလို့ တွေးမိနေတယ်။
ဒီ Post ထဲမှာ မှတ်ချက်ပေးသူ ငါးယောက်ထဲ ၃ယောက် က ရွာထဲ ရှိနေဆဲ။
ကျန် ၂ယောက်ရော သူတို့ ချခဲ့တဲ့ စကားတွေ ရှိတဲ့ ရွာလေး ကို သတိမှ ရကြသေးရဲ့လား မသိ။
လာမဲ့ ၂၇၆ ရေး ထဲ က ကျလာမဲ့ ၁ ရေး အတွက် ကြိုတင်ခံစားရင်း
စိတ်ဝင်စားစရာပိုကောင်းသွားတာက ဒီလောက်များတဲ့ပိုစ့်တွေထဲက ပထမဦးဆုံး မဲကျလာတာ လူမျိုးရေးပိုစ့်ဖြစ်နေတာပဲ။
သုတေသနရဲ့ ပထမဦးဆုံး ပိုင်ရှင်က ကိုအောင် (ခ) ကိုချို ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ သဂျီးမင်းရဲ့ဆိုဒ် ချိုမြိန်စွာ ဆက်လက်အောင်မြင်မယ်လို့….
အနော်က ဘယ်တုန်းက ရွာထဲရောက်ပါလိမ့်
ဖြစ်ဖြစ် ဒီအစီအစဉ်က မလွတ်တမ်း စောင့်ဖတ်ရမယ့် ချစ်စရာ အစီအစဉ်
ပထမဆုံး ဒီခြေလှမ်းဟာ အို နောက်ဆုံးတော့ ပန်းတိုင်ရောက်နိုင်မယ်
ဟာဟာ ဟားဟာ ဟား
ဒူတူတူး ဒူးတူ ဒူးတူတူးးးး
ယုံကြည် ခြေတစ်လှမ်း ခြေတစ်လှမ်းးးး
2011 ဆိုတော့ ကျနော် အားကောင်းမောင်းသန် ရွာထဲရှိနေချိ်န်
အလုပ်အနေအထားအရ ခရီးသွားနေရ ဘို့များတယ်
အရင်က လူပေါင်းများ စွာ ရေးလိုက် မန်းလိုက် ဖတ်လိုက်နဲ့ ရှိနေခဲ့တဲ့နှစ်များ ကို သတိရမိပါတယ်
ကိုအောင် ပျောက်သွားးတာ တစ်နှစ်ကျော်ပါပေါ့..
အရင်က ကျမ ကွန်ပြူတာ စကိုင်ကာစက
မြန်မာလိုဖတ်လို့ရတဲ့ ဂဇက်ကို အကြိုက်ဆုံး
နောက်ပိုင်း ဖုန်းလေးနဲ့ အလွယ်တကူ သုံးလို့ရတဲ့
ဖေ့စ်ဘုတ်ကြီ က အသုံးများလာတော့ ရွာထဲကိုသိပ် မဝင်ဖြစ်တော့ဘူး
စဖတ်တုန်းက မန်ဘာမဝင်ဘဲ ဒီလိုဘဲဝင်ဝင် ဖတ်ပါတယ်
နောက်ပိုင်း သကြီးက အကြံပိုင်တယ် စီဂျေများသာဖတ်ရန်တွေ
လုပ်လုပ်ပြစ်တော့ မဖြစ်ချေဘူးဝင်မှ ဆိုပြီး ဝင်ဖြစ်တာ
စပ်စု တာ ဝါသနာမို့ ဘာတွေများရေးထားပါလိမ့်ဆိုပြီး
​မလတ်​ သူကြီး ခင်​မင်​ရပါ​သော အ​ပေါင်းအ​ဖော်​များခင်​ဗျား
အမြဲတန်း​တော့အားရင်​ဝင်​ဖတ်​ဖြစ်​ပါတယ်​ အလုပ်​များသထက်​များလာက​တော့ မနှစ်​ကနဲ့မတူ လို့​ပြောရမလိုဖြစ်​​နေပြီ ကျ​နော်​တို့လိုပြည်​ပြတိုင်းပြည်​ကလာတဲ့လူ​တွေဟာ လုပ်​ခမ​လျှော့ရင်​​တောင်​အလုပ်​ပိုလုပ်​ရပါတယ်​ အလုပ်​ထဲမှာဓာတ်​ပုံစမ်းရိုက်​​ပေးရင်း အခု​တော့အင်​ဒိုးရိုက်​ဘို့. အခန်းနဲ့မီစက်​​တွေပါဆင်​​ပေးပါတယ်​ ကျ​နော်​ကဒိုင်​ခံရိုက်​​ပေးပြီး အလုပ်​​ဖော်​တ​ယောက်​က ပန်းသီးစပယ်​ရှယ်​လစ်​ ပြင်​​ပေးစာရိုက်​​ပေးပါတယ်​ ပင်​ပန်း​ပေမဲ့ထွက်​လာတဲ့ပုံ​လေး​တွေကြည့်​ပြီးကြည်​နူးရပါတယ်​ ကိုယ်​တိုင်​ကလည်း၁၀လပိုင်းလက်​မှတ်​တခုရဘို့စာ​မေးပွဲအတွက်​ပြင်​ဆင်​​နေရတာလည်းပါပါတယ်​
ကုန်​လွန်​ပြီး​သောကာလများအပ်​ဂရိတ်​လုပ်​ရရင်​ဖြင့်​ ချစ်​လွှစွာ​သောမိခင်​ကြီးက​ဆေးရုံ​တော်​ဝင်​ဆင်​တာမှာ တင်​လိုက်​ဆင်းလိုက်​ ၂နှစ်​အကြာ မနှစ်​ကဘဲဆုံးပါးသွားပါတယ်​ အမြန်​ပြန်​လို့မရဗီစာ၃ရက်​​စောင့်​ရတာ​ကြောင့်​ အသက်​မမှီ ရက်​လည်​ခါနီးမှ​ရောက်​ပြီး အလုပ်​အ​ခြေအ​နေအရ တရက်​ဘဲ​နေပြီးပြန်​ခဲ့ရပါတယ်​ ​နေရတဲ့တရက်​မှာဘဲ၂၅နှစ်​ကြာမ​တွေ့ခဲ့တဲ့ သူငယ်​ချင်းကို​တော့​တွေ့ခဲ့ရလို့ဝမ်းနည်းဝမ်းသာ ( ခုထိတကိုယ်​တည်း)
သမီး၂​ယောက်​အ​ကြောင်းးက​တော့အကြီးမကက​နေဒါမှာအထက်​တန်း​ကျောင်းတက်​ရာက​နေ ၉၄ပါဆင့်​နဲ့စ​ကောလားရှစ်​ရပါတယ်​ အမြငိ့ဆုံးတိုရန်​တိုကိုဝငိလို့ရ​ပေမဲ့​ဈေးသက်​သာတဲ့အယ်​ဗာတာကိုဘဲ​ရွေးပါတယ်​သူ့ယသာ​ရွေးတာ ကျ​နော်​ဘာမှမသိလို့ဘာမှမပြာ အခုလည်းဝါသနာပါတဲ့ ပိုင်း​လော့လုပ်​မယ်​ဆိုပြီး ကွန်​ပြူတာနဲ့. ရူပ​ဗေဒကို ဒယ်​ဗယ်​​မေဂျာယူပြီး​ကျောင်းတက်​ဘို့ပြင်​​နေပါ​ကြောင်း
အမျိုးထဲမှာကျ​နော်​ကအရွယ်​ဗရာက်​လာတာနဲ့အတူအမျိုးထဲကစာ​တော်​တဲ့က​လေး​တွေကိုတနိုင်​တပိုင်​​ထောက်​ပန့်​​နေရတာမို့. ခုတ​လောဘယ်​နိုင်​ငံမှမဂိုးနိုင်​ တူမ​လေးတ​ယောက်​မနှစ်​က​တော့တန်းထဲဝင်​ပြီး​ဆေးလိုင်းတက်​​နေ​လေရဲ့. အမလတ်​​ရေ
မြန်မာပြည်က.. အဲဒီဗီဇာစနစ်ကို.. ပြင်သင့်နေတာကြာပြီ..။ အခုထိအဆင်မပြေနိုင်ကြသေးဘူး..။
ဆိုတော့.. ကိုအောင်.. ယူအက်စ်လာလည်ရင်လည်းပြောပါဦး..။
​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​သူကြီးရယ်​ နယူး​ယောက်​ကသူငယ်​ချင်းကလည်း​ပြောပါတယ်​ က​နေဒါ​ယောက်​ရင်​ကား​မောင်း၈နာရီဆို​ရောက်​ပြီ လာကြိုမယ်​​ပြောပါတယ်​ ခက်​တာကလိုချင်​တဲ့ပိတ်​ရက်​ရှည်​မရ. အမှန်​ဒီနှစ်​တလ​လောက်​ခွင့်​ယူပြီး ဂျပန်​သွားဘို့စီစဉ်​တာ ပိတ်​ရက်​၅ရက်​ထက်​မပိုရဆိုလို့ ဘယ်​ကိုမှ​ရောက်​ဖြစ်​မယ်​မထင်​ မိခင်​ကြီးမရှိ​တော့မြန်​မာပြည်​လည်းမပြန်​ချင်​ ကျ​နော်​တို့ဆီက က​နေဒါနဲ့အ​မေရိကန်​ ဆိုဗီစာမလိုဘူးလို့​ပြောတယ်​ ​ရောက်​ရင်​​တော့ လှည့်​ဝင်​မှာပါ
မီး​တွေစက်​​တွေဆိုလို့. အထင်​မကြီးပါနဲ့ဗျာ အင်​တာနက်​ကမပျက်​​သေးသုံးလို့ရတဲ့ဟာ​တွေဆက်​တင်​လုပ်​ပြီး​ပေးတာပါ ပိုက်​ဆံပိုမရပါဘူးဗျာ ကိုယ်​ကပညာရတာဘဲ​ကျေနပ်​ရတာပါ
အပြင်​မှာပိုက်​ဆဲ​ပေးရိုက်​ အဆင်​မ​ပြေမှကျ​နော်​တို့ဆီလှည့်​လာတာပါ ဒါ့​ကြောင့်​လည်းသူ​ဋ္ဌေးဖြစ်​​နေတာ​နေမှာ
ကိုယ်​က​တော့ပညာရတာဘဲ​ကျေနပ်​လိုက်​ပါတယ်​ ညိမ်​ညိမ်​မ​နေတတ်​​တော့ အခုမြန်​မာစာရိုက်​လို့ရ​တော့ တရုပ်​စာကို​ရေ​နွေးပြုတ်​​သောက်​ဘို့ ကြံ​နေပါ​ကြောင်း ဘိုင်​သယ်​​ဝေး ဆမ်​​ဆောင်းနုတ်​​တွေနဲ့မြန်​မာစာရိုက်​ရတာဂွတ်​ထ.
ကျုပ်မလည်း. ဆမ်ဆောင်နှုတ်၎နဲ့ မြန်မာစာရိုက်လို့မရ.. ဖတ်လို့မရ..
အဲ.. အမြစ်တူးလို့တော့မဖြစ်..။ ၀ရမ်တီ ဗွိုက်မှာမို့လေ..။
သမီးအငယ်ကိုတော့နုတ်၎ပေးသုံးတယ်ကျနော်ကတော့နုတ်၂နဲ့နုတ်၃ တွဲသုံးတယ် ကွာတာကနုတ်၂ကဘရိုဆာများများကြည့်လို့ရတယ် နုတ်၃ကဝမ်းဘရိုဆာဘဲသုံးလို့ရတယ် မန်းတလေးဘရိုဆာရတယ် နုတ်၎ကသမိးသုံးတာဆိုတော့ ဝလည်းမစိ. နုတ်၃တုံးကအမြစ်မဖော်ဘဲ အိုးပန်းအီးမေးနဲ့မြန်မာဖောင့်ထည့်တာ အနော်လည်းသူများလုပ်ပေးတာ. ဘိူင်သယ်ဝေး နောက်ဆိုပန်းသီးဝယ် ပန်းသီးမီနီကမြန်မာဖောင့်ဒေါင်းရုံဘဲ ဆိုင်သွားဘို့မလို. ဘလက်ကီးဆိုတာလေးဒေါင်းရုံဘဲ. ပန်းသီးကွန်ပြူတာလည်းမြန်မာဖောင့်အရမ်းအဆင်ပြေတယ်. အမေရိကန်ကမြန်မာတွေပြုစုထားတာ. ဝင်းဒိုးကျတော့. Wyzo browser ကျမှမြင်ရတယ်. ဖိုင်းယားဖောက်သုံးလည်းအဆင်မပြေ
အိုဘယ့်. မြန်မာလဖောင့်. ဘိုင်သယ်ဝေး တရုပ်စာကတိုင်ဝမ်ရောက်ကာစ. တရုပ်စာအားနဲတဲ့ကျနော်ကို. အခုသူတို့တောင်မဖြေရဲတဲ့. စာမေးပွဲကိုတရုပ်လိုဖြေပြ. ရေးပြမလို့ ဟဲဟဲ:):):)
အင်​ဒိုရီမှာ ဆမ်​​ဆောင်း​ဇော်​ဂျီ​ဒေါင်းလုပ်​ပြီး ဆက်​တင်​မှာ​ပြောင်းလိုက်​ရင်​မြန်​မာ​ဖောင့်​အဆင်​​ပြေပြီ နုတ်​၂နဲ့နုတ်​၃နုတ်​၄ ပါရပါ​ကြောင်း ခင်​မင်​လျက်​ မန်းတ​လေးဘရိုဆာကမန်းဂဇက်​ကြည့်​ရတာအဆင်​​ပြေတယ်​ ကီးဘုတ်​က​တော့ ပုဂံကအသုံးတဲ့​နေပါ​ကြောင်း
ဖေ့စ်ဘုတ်တော့.. iFont ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kapp.ifont&hl=en)
အဲဒါ Installed ပြီးရင်.. MY ကနေ ဇော်ဂျီသွင်းပြီး ကြည့်လို့ရပါကြောင်း..။
မန်းတ​လေးဘရိုဆာကမန်းဂဇက်​ကြည့်​ရတာအဆင်​​ပြေတယ်​ ကီးဘုတ်​က​တော့ ပုဂံကအသုံးတဲ့​နေပါ​ကြောင်း
.ကိုအောင့်အပြောအရ သမီးတွေထူးချွန်ကြတာသိရလို့ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း..ကိုအောင်ရေ :))
ကိူကြီးမိုက်​ ​က​လေး​တွေကအ​မေ​ပြောတဲ့ အ​မော​ပြေဆိုတာသူတို့မျက်​နှာ​လေး​တွေပါ အရင်​ကမျက်​နှာ​ချော​ချောမြင်​ရင်​ များများကြည့်​ချင်​တဲ့စိတ်​ရှိခဲ့​ပေမဲ့ အခုတကယ်​ကြည့်​ရမြင်​ရမှာက ကျ​နော်​တို့ရဲ့ရင်​​သွေး​တွေဖြစ်​တဲ့ ကျ​နော်​တို့ရဲ့က​လေး​တွေပါ အရွယ်​ကလည်းစကား​ပြောလာ တာ​နေမှာ ကိုကြီးမိုက်​က​လေး​တွေအတွက်​လည်းဝမ်းသာဂုဏ်​ယူမိပါတယ်​ဗျာ
အသံလေး ပြန်မြင်လိုက်ရလို့ ဝမ်းသာပါတယ် ကိုအောင်ရေ။
သမီးလေးတွေ အတွက် လဲ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ :-))
ဟွာလေ… မနေ့တစ်နေ့ကမှ ရွာထဲဝင်ပြီး ငမြောက်ငခြောက်လုပ်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့အဖို့ လေ့လာစရာ တွေတိုးတာပေါ့ ဒေါ်လေးမြ။
သူပြန်လာရင် ကျနော့်ကို ဒန်ပေါက်ချက်ကျွေးပါတဲ့ ……
​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ် ကိုဆာမိရယ် မြန်​မာ ပြညိ​ရောကိတိုငိး အမှတ်​တရ ဖြစ်​မိတာ​တွေ​က. ​ရွှေ တိဂုံဘုရား​နေ့တိုင်းတက်​ဖြစ်​တယ်​ ဘယ်​​နေရာသွားသွား လမ်း​လျောက်​ဖြစ်​တာများတယ်​ ဒံ​ပေါက်​ထမင်း ​နေ့တိုင်းစားဖြစ်​တယ်​ (ကြက်​လျှာစွန်း​နော်​) ​ရေခဲ မုန့်​ထက်​ ဖာလူဒါစား​နေကျမို့. ဖာလူဒါဘဲစားတယ်​ ကျန်​တာက​တော့ ဒိန်​ချဉ်​ လဘက်​ရည်​ဆို ၂ခွက်​ဆက်​တိုက်​​သောက်​တယ်​ :-) :-) :-) ငတ်​တာ မြန်​မာ ပြည်​ပြန်​တိုင်း ကျ​နော်​တို့လို ​ခြေသလုံးအိမ်​တိုင်​သမား​တွေက. အမျိုး​တွေ​တောင်​မနုတ်​ဆက်​နိုင်​ဘူး တာဝန်​မ​ကျေဘူး​ပေါ့ဗျာ လိုအပ်​ရင်​အ​ဝေးက​နေ​ထောက်​ပန့်​ပါတယ်​ ​ရေစက်​ဆုံရင်​​တွေ့ကြတာ​ပေါ့ဗျာ အဝင်​အထွက်​ အတည်​တကျမရှိ အသွားအလာ ခက်​ခဲမှာမို့. ကိုယ့်​ဓာတ်​ပုံ​တောင်​ အပ်​ဒိပ်​မလုပ်​ချင်​ ​ကျေးဇူး အများကြီး တင်​ရှိပါ​ကြောင်း
အူးအောင်အား ကြောင်က္ခထီးဗွဲ့ ချီးမြှင့်ပါသီ…။
ယူ​စေဗျား တနှစ်​​ကျောင်းလခ အ​မေဂျိက​ဒေါ်လာ ၃သောင်းစားစရိတ်​မပါ ၃နှစ်​စာအရင်​​ပေး​ချေပါ :-) :-) :-)
ကြောင်က္ခထီးအူးအောင်အား ၃နှစ်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာဂွင့် ပြုသီ။